Nzọụkwụ mbụ maka Karabağlar Subway | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Aegean35 IzmirNzọụkwụ mbụ maka Karabağlar Subway
13 / 11 / 2019 35 Izmir, ụgbọ okporo ígwè, Mpaghara Aegean, General, Maps, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Metro, Turkey
Nzọụkwụ mbu ụzọ ụgbọ oloko Karabakh
Uzo mbu nke uzo ugboala Karabağlar; İzmir Obodo ukwu ga-agụnye Karabağlar na netwọ ụgbọ njem ụgbọ oloko. Ihe oru ngo na uzo eji wuo ebepınar-Karabağlar metro line bidoro.
"Anyị ga-eji ụgbụ iron anyị Izmir"
Onye isi obodo ukwu nke Izmir Metropolitan Tunc Soyer, Izmir Main Transportation Master Plan na usoro metro, Ebepinar-Konak-Bozyaka-Eskiizmir Street-Gaziemir-New Fairground-Adnan Menderes Airport ga-ewuru, o kwuru. Soyer kwusiri ike na ihe dị ka puku mita 16 nke igwe ga-arụ tupu arụ ọrụ ahụ. Onu ogugu onu ogugu uzo ihe eji edo edo edoro anya. A ga-ekpebi ihe niile n'oge usoro ọrụ, na-eji data ndekọ ọnụ ọgụgụ na nyocha site na ụmụ amaala anyị. Na mgbakwunye na ọrụ ụgbọ oloko Buca na-aga n'ihu, Narlıdere tinyekwara usoro ụzọ ụgbọ oloko Karabağlar na atụmatụ anyị. Site na ọrụ ndị a niile, anyị ga-ahapụrịrị ezigbo usoro maka ijikọ İzmir na iji ụgbụ ağ.
6 maka İzmir Karabağlar Subway Engineering Tender…
Nzọụkwụ mbu maka Sultanbeyli Subway
3. A na-ewere nzọụkwụ mbụ maka aha ọdụ ụgbọ elu na Google
'Sgbọ okporo ígwè mbu Russia nke Russia
Maka Malatya-Elazığ-Diyarbakır High Speed ​​Train Project…
Ewere nzọụkwụ mbụ na oru Istanbul-Kocaeli metro
Nzọụkwụ ọzọ na Izmir Transportation Master Plan
Onye isi oche ATSO Alpaslan: "Ihe dị mkpa maka ilgbọ okporo ígwè"
Nrọ ahụ bụ nke mbụ Nzọụkwụ Mbụ Na Ụgbọ okporo ígwè Uzungol
Nzọụkwụ mbụ maka obodo ọhụrụ ahụ dị na Istanbul